Ko Ki's Page - Myanmar Network
Ko Ki's Likes
Ko Ki's Friends
Ko Ki's Discussions
စက်ကြီး နဲ့ စက်ကလေး..။
ရွာကို အလည်ရောက်ဖြစ်တုန်းက ငယ်ပေါင်းကြီးဖေါ်တွေနဲ့ ၀ိုင်းဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်..။ ကျနော်တို့ဝိုင်းမှာ သူစိမ်းရယ် လို့တော့ မပါပါဘူး..။ တစ်ယောက်က ကျနော့် အစ်ကိုလတ် ၊ တစ်ယောက်က အစ်မ၀မ်းကွဲရဲ့ယောက်ျား ကျနော့်ယောက်ဖ ဆိုပါတော့ ၊ ကျန်တာတွေကလည်း…Continue
Started this discussion. Last reply by myokoko Nov 13, 2013.2Replies9Likes
“ကရုဏာထက် မုဒ်ိတာက ခက်သကွ”…တဲ့..။ ကျနော့်ဆရာ မကြာမကြာ ဆုံးမတတ်တဲ့ စကားပါ..။ အစက သိပ်နားမလည်ပေမယ့် ရင်ထဲစွဲသွားအောင် ထပ်တလဲလဲ ဆုံးမတတ်တဲ့ ဆရာ့ကျေးဇူးကြောင့် သဘောပေါက် သလိုလို တော့ ရှိနေပါပြီ..။သနားတတ်တဲ့စိတ်က လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ မွေးကတည်းက…Continue
Started Nov 4, 20130Replies3Likes
မနေ့မနက်က ကျူရှင်တစ်ချိန်ပြီးလို့ အိမ်ခဏ ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန် အိမ်မှာ သမီးငယ်လေး တစ်ယောက်တည်း စာစောင်ဖတ်နေတာကို တွေ့ရတယ်..။ “သမီးလေး တစ်ယောက်တည်းလား မေမေနဲ့ မမရော” ဆိုတော့ “အဲ.. ဖေဖေ ပြန်လာပြီလား မေမေက မမကို ကျူရှင်လိုက်ပို့ ပေးနေတယ်” တဲ့..။ ညတုန်းက…Continue
Started Oct 28, 20130Replies 8 Likes
မနေ့က အုတ်ကျင်းလမ်းထိပ်က တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာ စာသင်ပြီး ပြန်ဆင်းလာတော့ အောက်မှာ ရပ်ထားခဲ့တဲ့ စက်ဘီးက ရှေ့ဘီးလေလျော့နေပြီ..။ နောက်တစ်ဝိုင်းကလည်း သိပ်မဝေးတာမို့ လေဖြည့်ပြီး နင်းသွားလိုက်ရင် ခဏနဲ့ ရောက်နိုင်တာပဲဆိုပြီး လေဖြည့်ဖို့ လေထိုးပိုက်ကို…Continue
Ends justify the means or means justify the ends ???
Started Oct 23, 20130Replies3Likes
တစ်ခါတုန်းက 10-တန်း နှစ်ချို့ကျောင်းသား တစ်ယောက်ကို စာသင်ပေးခဲ့ရဖူးတယ်..။ ကျနော်နဲ့တွေ့တော့ 10-တန်းစာမေးပွဲကို 2-ကြိမ်မြောက် ကျပြီးနေပြီ..။ မိဘတွေက စီးပွားရေး အဆင်ပြေသလို ဘာမဆို လိုချင်တာ မှန်သမျှ အလွယ်တကူရနေတော့ တန်ဘိုးထားရကောင်းမှန်း မသိရှာဘူး..။…Continue
Started Oct 11, 20130Replies5Likes
ဒီနေ့လို တနင်္ဂနွေနေ့မျိုးက ပုံမှန်ဆို မိသားစုနဲ့ တစ်နေကုန် အချိန် ကုန်ဆုံးစေရမှာမျိုးရယ်..။ ဒါပေမယ့် ရပ်အရေး ရွာအရေး ကိစ္စ လေးတွေ ပေါ်လာတော့ တနင်္ဂနွေနေ့ ဆိုပေမယ့် အိမ်မကပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး..။ ရပ်ကိစ္စ ရွာကိစ္စတွေကို လိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက် တော့ ည ဂ…Continue
Started Oct 7, 20130Replies4Likes
တစ်နေ့ညက သမိုင်းလမ်းဆုံရောက်တော့ အင်းစိန်ဖက်သွားမယ့်ကားကို ပြောင်းစီးရတယ်..။ မီးပွိုင့်မှာ မီနီမိနေတဲ့ 48 အထူးကားပေါ် အပြေးအလွှား တက်ခဲ့တယ်..။ ကျနော်လိုပဲ မီးပွိုင့်မှာ စောင့်စီးတဲ့သူ 10 ယောက်ဝန်းကျင် ရှိတာမို့ တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ တက်ခဲ့ရတယ်..။…Continue
တစ်နေ့က ၁၀-တန်းတုန်းက စာသင်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ တပည့်မကလေးက စာမေးစရာ ရှိလို့ ဆရာ ၀င်ဖြစ်အောင် ၀င်လာခဲ့ပေးပါဆိုလို့ အားတဲ့ အချိန်ကလေးမှာ ခဏ ၀င်လည်ဖြစ်ခဲ့တယ်..။ သူက E-major နဲ့ ကျောင်းပြီးလို့ အခု M.A (TEFL) တက်နေတာပါ..။ တစ်ခါက ကျနော် အကြံပေးထားတဲ့အတိုင်း…Continue
Started this discussion. Last reply by Yamin Aye Jul 29, 2013.2Replies 14 Likes
မနက်က သမီးငယ်ကို ကျူရှင် လိုက်ပို့ပေးဖြစ်နေတာနဲ့ ရုံးသွားဖို့ ကားမှတ်တိုင်ရောက်တော့ ၈-နာရီ ထိုးလုထိုးခင်ဖြစ်နေပြီ..။ မှတ်တိုင်မှာ ရပ်လာသမျှ ကားတိုင်းကလည်း ပြွတ်ကြပ်သိပ်နေတာနဲ့ ချောင်တဲ့ ကားကိုစောင့်ရင်း နေပူထဲမှာ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ ရပ်နေခဲ့မိတယ်..။…Continue
ဆိတ်ဖွားဆိုတာ ဘယ်သူတဲ့လဲ… နာဘဲ.. နာဘဲ.. နာဘဲ..။
Started Jul 4, 20130Replies3Likes
“အိမ်း… ငါ့တူများတို့ လူစုံကြပြီလားကွဲ့.. ကာလသားခေါင်း မောင်ထူးလေး မမြင်သေးပါလား… မောင်လှသန်း… ငါ့တူလေး သေသေချာချာ ဖိတ်ခဲ့ရဲ့လားကွယ်”“ဖိတ်ခဲ့ပါတယ် ဘထွေး.. အခုနကတောင် ဦးမာလာ ရေတွင်းမှာ ရေခပ်နေတာ တွေ့ခဲ့သေးတယ်… သူ့မိန်းမ ဂင့်ဂဲဈေးက…Continue
Ko Ki's Page
မချော သုံးယောက် ကိုယ်တစ်ယောက်..။
သမီးကြီးက ရွှေသွေး တို့ တွတ်ပီတို့ ဖတ်တယ်..။
သမီးငယ်က လက်ဆွဲပြီး အပေါက်ဝအထိ လိုက်နှုတ်ဆက်တယ်..။
သမီးငယ်က ဖေဖေ ဘာလို့သောက်တာလဲလို့မေးတယ်..။
အမျိုးသမီးက ငါ့ကို ကလေးတွေနဲ့ မထားခဲ့ပါနဲ့ လို့ ပြောတတ်တယ်..။
မချောက သုံးဗွေ အီဖေကိုယ်က တစ်ကိုယ်တည်း ဆိုပေမယ့် ကိုယ်ပိုင် မိသားစုတစ်ခုကိုတော့ ပိုင်ဆိုင်ထားမိပြီပေါ့..။
ဘယ်အချိန်ထိလဲ ဘယ်လိုချစ်မှာလဲ လို့ နွဲ့ယဉ်ဝင်း ရဲ့ သီချင်းထဲကလို မေးလာခဲ့ရင်တော့ အဲဒီသီချင်းထဲကလိုပဲ...
သမီးကြီးကြိုက်တတ်တဲ့ Hip Hop စကားလုံးနဲ့ ဆိုရင်တော့ ကျနော့်ရဲ့ ၀င်သက် ထွက်သက်တွေ ရပ်တန့်သွားတဲ့ အထိပေါ့.. ။...........။
At 9:53 on October 16, 2019,
At 9:32 on January 13, 2015,
At 12:34 on January 1, 2013, Yin Min Myint Z∂w said…
ဟီးဟီး..အဆက်အသစ်ကော အဟောင်းကောမရှိပါဘူး.. ထားဖို့အချိန်တောင်မရဘူး.. ^_^ ဒါနဲ့ဦး..စာတွေဆက်ရေးပါအုံး.. ^_^ သမီးတို့ အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်.. ^_^
At 2:16 on January 1, 2013, Yin Min Myint Z∂w said…
Thank you so much for accepting me as your friend.. ^_^ Happy New Year!!! ^_^
At 2:13 on January 1, 2013, Yin Min Myint Z∂w said…
နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်..လူသစ်ဖြင့်..ကြိုးစားအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ... ^_^
At 11:34am on November 12, 2012, Myanmar Network gave Ko Kiagift…
At 13:59 on November 8, 2012, aungsi said…
Nice to meet you,Ko Ki
At 15:20 on September 27, 2012, Nant Thin Thin Hmwe said…
လာလည်သွားတယ်နော် ကိုကီး။ စာတွေအများကြီး ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။
မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ အကိုတို့တတွေ မျိုးဆက်သစ်တွေကို စာများများဖတ်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါစေ။